PressReader - Eyethu Baywatch: 2018-10-10 - Kukhalwa ngo­mazisi aban­ga­landiwe
Kukhalwa ngo­mazisi aban­ga­landiwe
Eyethu Baywatch - 2018-10-10 - NEWS • IZINDABA - Wise­man Mthiyane
IHHOVISI laseM­pan­geni loMnyango Weza­sekhaya selinxuse umphakathi ofika uku­zoshaya omazisi, ukuba ubuye phela uzoba­landa.
Oy­iMe­nenja yaleli­h­ho­visi uMnuz. Vusi Mjadu ut­shele leliphep­hand­aba ukuthi ku­manje kuno­mazisi aban­gaphezu kwezinku­lung­wane ez­im­bili abasaduve emah­ho­visi abo.
‘Labo mazisi babeb­haliselwe nga­bantu esikhathini es­ed­lule, kodwa kuze kube manje abezi uku­zoba­landa, kanti nathi asi­nayo in­dawo yokubagcina.
‘Ihhovisi lin­cane kabi ukuthi lin­gagcina omazisi abaningi kan­gaka.
Siyawunxusa umphakathi ukuba un­galindi am­ath­onsi abanzi, kodwa usukumele phezulu, uku­zolanda omazisi bawo.
‘Siyawunxusa umphakathi wakithi ukuthi, uma usuz­i­fak­ile iz­icelo zomazisi, ezithatha isikhathi en­ganga­ma­sonto am­a­bili nje vo uku­cut­shun­gulwa, bese uyabuya phela uzolanda omazisi bawo, ukuze singabi nenkinga yokuphelelwa yin­dawo, ngenxa yokugcwala ko­mazisi aban­ga­landiwe.’
UM­jadu ubuye wanxusa nabazali bezin­gane ezine­minyaka engu-16 ukuba ban­galindi aM­ath­onsi abanzi, kodwa ba­phuthume uku­zothathela izin­gane zabo omazisi.
‘Siyaku­jab­ulela ukubona abantu betheleka ukushayela izin­gane zabo omazisi, kodwa kuyasip­haz­a­misa ukubona abantu be­zoshayela izin­gane es­ezine­minyaka engu-20 kuya phezulu, engabe beza nge­sikhathi izin­gane zih­langan­isa iminyaka engu-16.
‘Im­ban­gela yal­abo­layini abade ba­bantu abeza lapha emah­ho­visi ethu, idalwa yi­labo bantu, kanye nal­abo abalinda isikhathi sama­ho­lidi ezikole.
‘Ngabe awu­mude kan­jena lo­layini ukuba abantu batheleka lapha zonke izin­suku, ban­galindi izikhathi zama­ho­lidi.
‘Siya­banxusa abantu bakithi ukuba bakuyeke ukun­donda ukusuka, kodwa ba­sukumele phezulu uma kukhona usizo abaludin­gayo emah­ho­visi ethu.
Abanye abantu abasihluphayo yi­l­aba aba­suke be­zoshaya ama-pass­port.
‘Nabo bafike bahlale isikhathi es­ide, bese beza lapha seku­son­dele isikhathi sokuba bathathe uhambo lwabo, bese be­lin­dela ukuthi nawo azoshe­sha njen­goku­jaha kwabo.
‘Ak­wen­zeki kan­jalo, nawo athatha isikhashana ukuba abuye. Abantu aba­funde uk­wenza iz­into nge­sikhathi,’ kunxusa uM­jadu naye obe­matasa­tasa es­iza abantu abebegcwele ngaphan­dle kwamah­ho­visi abo. Un­col­lected IDs worry Home Af­fairs
IMe­nenja yehho­visi laseM­pan­geni loMnyango Weza­sekhaya uMnuz. Vusi Mjadu es­iza abantu